Messi Oo Samaynaya Mucjisooyinkii Forlán iyo Güiza
HomeWararka MaantaMessi Oo Samaynaya Mucjisooyinkii Forlán iyo Güiza
Messi ayaa haya dariiqii ay jeexeen xiddigihii Diego Forland iyo Guiza kadib markii uu Axadddii dhaliyey saddex goo loo daran doori ah, isla markaana uu soo yareeyey farqigii goolasha u dhaxeeyey Cristiano Ronaldo ee ahaa 11 gool oo uu ka dhigay laba gool oo kaliya.
Tartanka loogu jiro gool dhalinta horyaalka La Liga waxa ka dhacay dhawr arrimood oo hore oo taariikhda ku jira; Dani Güiza iyo Diego Forlán ayaa loo caleemo saaray in ay noqdeen gool-dhaliyeyaasha sannadka markii ay sameeyeen ka-daba-imaanshihii ugu weynaa taariikhda horyaalkaas.
Dani Güiza ayaa xili-ciyaareedkii 2007/2008 ayaa waxa uu ku guuleystay gool-dhalinta horyaalka Spain isaga oo u ciyaaraya Mallorca. Weeraryahankii hore ee Sevilla ee Luis Fabiano ayaa 13 ciyaarood waxa uu ku dhaliyey 16 gool, halka Guiza uu 11 gool ku dhaliyey 13 ciyaarood. Laacibkan reer Brazil ayaa aakhirkii ay ku adkaatay in uu sii wado gool-dhalintiisa isaga oo ku banjaray 24 gool, laakiin Guiza ayaa sii waday halgankiisa illaa uu goolasha gaadhsiiyey 27 gool, isla markaana uu noqday gool-dhaliyihii sannadkaas.
Sannadkii xigay waxa kabta Dahabka ah ee Yurub la siiyey Diego Forlan kadib markii uu sida daadka ugu fatahay goolasha. Forlan kulankiisii u horreeyey ee ay Atletico Madrid la ciyaarto Malaga waxa uu ruxay garoonka, shabaqana waxa uu ku hubsaday kubad kasta oo uu qabtay kadib markii kooxdiisu ay 4-0 ku garaacday Malaga, laakiin isla ciyaartaas waa uu dhaawacmay isagoo garoomada ka maqnaa 5 kulan. Markii uu horyaalku marayay 10 ciyaarood, waxa uu lahaa 3 gool oo kaliya, haddii la barbar dhigo Samuel Eto’o oo u ciyaarayay Barcelona waxa uu wakhtigaas lahaa 13 gool, hase yeeshee weeraryahankaas hore ee reer Uruguay ayaa qaybtii dambe ee horyaalka ay xidhi kari waayeen difaacyahannada Spain, waxaanu dhaliyey 20 gool, hase ahaatee Samuel Eto’o ayaa yeeshay 30 gool, hoggaankana hayey illaa ciyaartii ugu dambaysay ee horyaalka uu Diego Forlan ka dhaliyo saddexley (hat trick) kulankii ugu dambeeyey ee horyaalka lagu soo gebogabeeyey, waxaanay tirada goolashiisu noqdeen 32.
Chelsea 0-0 Arsenal All Goals & Extended Highlights
Chelsea vs Hull City 4-0 All Goals & Full Highlights
17/02/2018 Diiriye Ahmed
Mario Balotelli Oo Gaadhay Garoonka Tababarka Liverpool Si Uu Tijaabada Caafimad U Maro